Muqdisho oo ka mid noqotoy 10-ka magaalo ee ugu khatarta badan dunida - Caasimada Online
Home Warar Muqdisho oo ka mid noqotoy 10-ka magaalo ee ugu khatarta badan dunida
Muqdisho oo ka mid noqotoy 10-ka magaalo ee ugu khatarta badan dunida
Warbixinta sanad laha ah ee uu daabacay wargeyska top10zen ayaa waxa uu kaga hadlay 10-ka magaalo ee sanadkan 2018 ugu khatarta badan dhanka Amaanka waxa uu sheegay in Magaalooyinkan la isku weeraro sidoo kalena la isku dilo waxaana dambiyada ay gareen heerkii ugu sareysay.
Dhacdooyinka ugu badan ee ka dhacay 10-kan Magaalo waxaa kamid ah dilalka, weerarada, dhaca, afduubka, qaraxyada iyo rabshado kala duwan oo dadka shicibka ah waxyeelo ka soo gaarta.
Waxaana Magaaladan Muzaffarabad ay dhacdaa xadka Pakistan, heerka falalka liddiga ku eh amaanka waxa ay gaareen meeshii ugu sareysay 2016-kii oo boqolaal qof lagu dilay.
5: Magaalada Ciudad Juarez ee wadanka Mexico: Ciudad Juarez waxaa loo aqoonsaday Magalada ugu rabshadaha badan caalamka sanadii 2009, walina waa sideedii, waxaa ka dhaca weeraro ay geestaan kooxo ka ganacsada wax-yaabaha maanka dooriya, in dumarka lagu xadgudbana caan ayeey ku sii tahay, heerka dilalka ayaa ah in 1,00,000 maalin lagu dilo 130 qof.
7: Magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq: heerka falalka ka dhanka ah amaanka iyo dambiyada ayaa cirka isku shareeray tan iyo markii ciidamada Mareykanka laga howlgaliyay Ciraaq, qaraxyada Ismiidaaminta iyo kuwa loo adeegsado gawaarida aya si joogta ah ugu dhaca Baqdaad, sidoo kale dadka ayaa lakala iibsadaa, tan iyo markii la riday Taliskii Saadaam Xuseen 2003-dii.
8: Magaalada Caracas ee dalka Venezuela: Dowladda Venezuela ayaa qiratay heerka dambiyada ka dhaca Magaalada Karakas (Caracas) dadka dalxiisa yaasha ee imaanaya Magaalada ayaa lagu wargeliyaa iney feejignaadaan, dibad baxayo ayaa dhaca, kooxo hubeysanna wadooyinka ayey ka fuliyaan weeraro ay kamid yihiin: afduubka , dhaca, boobka waana kuwa maalin kasta dhaca.
10: Magaalada Detroit oo ka tirsan Gobalka Michigan ee dalka Mareykanka: Detroit waa magaalada ugu khatarta badan Mareykanka, heerka falalka Dambiyada waa 2,135 waxaana la kulma 1,00,000 qof oo kamid ah dadka deegaanka, sababta ugu weyn ee rabshadaha ayaa ah- hoos u dhac dhanka dhaqaalaha iyo shaqo la’aan jirta.